Waaheen Media Group » WUXUU WAAYAY HIIL QARAN!! Home
Browse:Home Articles WUXUU WAAYAY HIIL QARAN!!	WUXUU WAAYAY HIIL QARAN!!
on August 2, 2015 |
Comments Off on WUXUU WAAYAY HIIL QARAN!!	Waqti ku sinaa badhtamaha 2008 abaara 9:00-9:30 barqanimo, waxaa aan ka soo baxay guriyaga oo ku yaalay xaafada kiiniyada ee magaalada burco. Waxaan cagta soo saaray wadada laamayga ah ee isku xidha faras-magaalaha/suuqa iyo saylada xoolaha, intii aanan soo gaadhin suuqa ee aan maraayo halkii ay ahaan jirtay warshadii jalaatada ee Cawil Dhiif, kana xigtay dhinaca koonfureed qudhaca dheer, waxaaba ay indhahaygu qabteen oo iga horeeya nin xaga dhimirka ahaa oo ku magac dheeraa ILKA-CASE, waxana uu ahaa nin ka caana magaalada burco, waxaanaan ku rajo waynahay in ay garanayaan badankoodu dhalinyarada reer burco. Ilka-case masaafa ahaan waxa uu iga horeeyay qiyaastii 20m ama ka badan, waxaa ka soo hor baxday gabadh dhalin yaro ah, waxa ay gacanta ku laalaadinaysaa caagan yar ee barafka lagu kaydsado oo ay ku jirto jallaato, si kadis ah waxa ay indhaha ugu kala qaaday Ilka-case oo xamaamadiisii xambaarsan, waxa uu laftarkiisu u xaglinaayay dhinaceeda, malaha Jalllaatada si uu uga iibsado, balse naxdin iyo anfariir ku dhacay gabadhan yar waxa ay dhulka ku sii daysay caageedii ay sidatay,waxana ay u carartay masaafo waxoogaaya, isna maba hakane dhinicii caaga ayuu u dhaqaaqay, dadku waxa ay naawilayaan waxa uu sameeyo, cagidiiba waa furay dabeetana inta uu midh Jallaato ah kala baxay ayuu inteedii kale u daboolay, jeebkana gacanta kula holladay, qaddar yar oo lacagana ka soo saaray, oo lacagtii dhulka dhigay caagiina dusha ka saaray!! – Malaha waxa uu uga jeeday in aanay dabayshu kala yaacin lacagta- ka dib na waxa uu sii watay socodkiisii, inantii naxsanayd ee anfariirtay hadda layaab iyo farxad ayaa indhaheedii laga dareemay!! Dadkii goob-jooga ahaana wax yaaba iyo wax qosla ayay noqdeen. Haddii uu Ilka-case sii watay socodkiisii ma fogaanin ee maqaaxi u jirtay qiyaas ahaan 30m goobtan hawsha la
yaabka lihi ka dhacday ayuu iska fadhiistay- haddii aad qof goobtan arkay tahay akhriste waxa uu fadhiistay mid ka mida kuraastii lagu shaahaynaayay ee maqaaxidii ku xigtay macmacaanlihii IIDLE. Anna wax i duway ma xusuusto ee waxaan u leexday dhinicii maqaaxida- isla intii aanu kasban xabbadii Jallaatada ahayd isla markaana uu xamaamadii uu caanka ku ahaa is dacal dhigayo waxa ay indhihiisu qabteen nin isna xaga dhimirka ah oo uu ka muuqdo balanbal iyo bayhoof. Qiyaastii sidii uu saaka ninkani uga soo toosay meelahan duleedka magaalada gabadanadii iyo gawdhiidhkii ku dhacayay xaloo dhan kama calluuman oo waa diifaysan yahay. Ilka-case inta uu mar dhadhamiyay xabbadii Jallaatada ahayd ayuu u dhiibay ninkii una raaciyay erayadan “waar waa malabe hoo nafta ku qabooji!!” Dadkii goob-jooga ka ahaa muuqaalaadan cajiibka leh oo la amakaagsan 5 daqiiqo gudahood sida ay wax u dhacayaan ayaa mid ka midi waxa uu su’aalay Ilk-case erayo sidan u ekaa ” oo adaaba isaga baahnaaye maxaad isaga cuni wayday?!!. Ilka-case inta uu qadar second na ah aamusnaa ayuu ku jawaabay “asagaa iga sii waalan!!”
Inkastoo aanay muddo Ilka-case indhahaygu milicsan oo aanan arag maalmahan aan dhex joogay magaalada burco, haaddana waxaa ka muuqata Ilka-case in uu ahaa intii aanu xanuunkan dhimirku asiibin nin geesiya oo dhiiran, inta badan caruurtu si fudud ugama riwaayad san jirin, mana ahayn nin gardaro badan, sidoo kale waxaa ka muuqanaysa in uu ahaan jiray nin naxariis badan oo deeqsiya, waayo waxaabaad ka garanaysaa sida uu Jallaatada u huray ee uu uga naxay ninkan kale, intaa waxa dheer in uu Ilka-case ahaan jiray nin xalaal-miirada/waraca waayo muu boobin gabadhii yarayd ee lacag ayuu siiyay.
Haddaba akhriste ugama jeedo fariinta sheekadan in aan ku baro Ilka-case ama dhacdo aan goob-jooge ka ahaa, balse waxa aynu is waydiinaynaa dad badan oo bulshadeena ka mid ah oo silcaya oo lo’ da qashinka meelahaa lagu soo qubo la cuna, miyaanay ahayn Ilka-casoo miidhan?! Maxaynu u daryeeli waynay?!. Muxuu qarankeenu u dayacay?! Aaway xuquuqdii ay ku lahaayeen dalka?!
Qalinka: Cabdikarim Bocood Bocood55@gmail.com